ऋण लिनुअघि हेर्नुस्, कुन बैंकको... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
ऋण लिनुअघि हेर्नुस्, कुन बैंकको ब्याजदर सस्तो?
बैंकमा ऋण लिन जाँदै हुनुहुन्छ, भने एक पटक सबै बैंकको आधार दर बुझ्नुहोस्।
किनकि बैंकले लिने ऋणको ब्याज आधार दरमा निर्भर रहन्छ। सामान्यतः जुन बैंकको आधार दर कम हुन्छ, त्यो बैंकको ऋण पनि सस्तो पर्न जान्छ। पछिल्लो समय बैंकहरुको आधार दर घट्दै गएको छ।
यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २८ वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९. ५८ प्रतिशत छ। जवकि गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा १०. १४ प्रतिशत थियो।
आधार दर घट्नुले ऋणको ब्याजदर पनि सामान्य घटेको संकेत गर्दछ। यद्यपी आधार दरले मात्रै ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुने भने होइन। आधार दरमा जोडिने प्रिमियम दर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। बैंकहरुले ऋणको प्रकृति हेरिकन आधार दरमा निश्चित प्रिमियम दर जोडेर ऋणीलाई ब्याजदर तय गरिदिन्छन्।
त्यसकारण ऋणीले आधार दरमा जोडिने प्रिमियम दर पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। यदी दुई बैंकको आधार दर समान ८ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर जुन बैंकले कम लिन्छ, सो बैंकको ब्याज सस्तो पर्छ।
ऋणको प्रयोजन, ग्राहकप्रति बैंकको विश्वास, धितोको मूल्य लगायत पक्षलाई केलाएर बैंकहरुले प्रिमियम दर निर्धारण गर्छन्। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ऋणमा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम दर जोड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार आधार दर ८ प्रतिशत भएको बैंकले कृषिमा दिने ऋणमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै व्याज लिन पाउने छन्। तर अन्य व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिइने ऋणमा बैंकहरुले आफै प्रिमियम दर निर्धारण गरेर ऋण दिन्छन्। बैंकहरुले आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन्।
बेलाबेलामा विभिन्न बैंकहरुले घरजग्गा, सवारीसाधन खरिद वा अन्य कुनै व्यवसाय गर्नका लागि सस्तो ब्याजको अफर समेत ल्याएका हुन्छन्। ती अफरबाहेक सामान्य अवस्थामा ऋण लिन चाहनेलाई आधार व्याजदर महत्वपूर्ण हुन्छ।
यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणमा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत जोडेर त्यसमा ५ प्रतिशत घटाई ऋणको ब्याज निर्धारण हुन्छ।
सुरुमा ब्याज सस्तो गरे पनि केही महिनामै व्याज बढाउने गरेको गुनासो ऋणीहरुले गर्ने गरेका छन्। यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै हाल राष्ट्र बैंकले स्थिर दरमा पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऋण अवधिभर व्याजदर घटबढ नहुनेगरी ऋणीले बैंकसँग सम्झौता गर्न सक्ने छन्। यसले ऋणीलाई पटक पटक व्याजदर परिवर्तनका कारण पर्न सक्ने अप्ठेरोलाई निराकरण गर्न सक्नेछ। यद्यपी यसको ब्याज गतिशीलभन्दा केही बढी हुन सक्ने छ।
ऋण लिनुअघि जान्नुहोस्, कुन बैंकको आधार दर कति ?
आधार दर (२०७६ असोज)
आधार दर (२०७५ असोज)
Source: 1st quaterly report
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३, २०७६, ०३:४४:००